Cristiano Ronaldo Oo Ka Hadlay Shaqo Ka Ceyrinta Ole Gunnar Solskjaer
HomeHoryaalka IngiriiskaCristiano Ronaldo oo ka Hadlay Shaqo ka Ceyrinta Ole Gunnar Solskjaer
November 23, 2021 Horyaalka Ingiriiska, Suuqa kala iibsiga, Wararka Ciyaaraha, Warka Xiisaha Leh 0
Xiddiga reer Portugal ee Cristiano Ronaldo ayaa ka hadlay tababarihii ay shaqada ka caydhisay Manchester United ee Ole Gunnar Solskjaer, waxaana qoraal uu qiiro leh oo uu kusoo daabacay bartiisa bulshada ee Instagram uu sagootin uga dhigay macallinka reer Norway.
36 jirka reer Portugal ee shanta jeer ku guuleystay abaal-marinta Ballon d’Or ayaa xilli ciyaareedkan oo kaliya ka hoos ciyaaray Ole Gunnar Solskjaer, waxaana shaqsiyan uu ahaa ciyaartoyga ugu goolasha badan ee kooxda la baxsaday marar badan oo ay halis ku jireen.
Ronaldo ayaa dib u xasuustay waqtigii ay Old Trafford ka wada ciyaari jireen Solskjaer ee ay labadooduba kooxda ka wada tirsanaayeen, markaas oo isaga oo da’diisu yar tahay uu Ole ka mid noqday xiddigihii kusoo dhoweeyey horyaalka Premier League.
Qoraalka uu Ronaldo ku daabacay bartiisa Instagram ayuu ku yidhi: “Waxa uu ahaa weeraryahanka kooxda markii ugu horreysay ee aan imid Old Trafford, haddana waxa uu noqday tababarahayga markii aan kusoo laabtay Man United.
“Waxa uu ahaa binu-aadam heersare ah. Wanaag ayaanan u rajaynayaa noloshiisa oo dhan.”
Cristiano Ronaldo waxa uu qoraalkiisa soo raaciyey sawir laga qaaday xilligii ay ciyaartoyda ka wada ahaayeen Old Trafford oo ay u dabbaal-degayaan gool uu midkood dhaliyey.
Si kastaba, Cristiano Ronaldo ayaa Manchester United u dhaliyey goolasha ugu badan xilli ciyaareedkan isaga oo saxeexay sagaal gool oo dhamaan tartamada ah. Goolashiisa waxa ka mid ahaa kuwii uu dhamaadkii ku badbaadiyey Manchester United kulamadii Young Boys, Villarreal iyo Atalanta.